Isku dheelitirka suuqgeynta dalxiiska iyo baahiyaha amniga |
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka Safarka USA » Isu dheellitirka suuqgeynta dalxiiska iyo baahiyaha amniga
Xagaagii la soo dhaafay, warshadaha dalxiisku kaliya ma aysan helin isbeddel weyn oo suuq-geyn ah, laakiin waxay ku dhex dhacday xiisaddii ugu xumeyd taariikhda.
Xitaa illaa iyo tobankii sano ee la soo dhaafay ee qarnigii labaatanaad, ma ahayn wax aan caadi ahayn in la maqlo saraakiisha dalxiiska ee ka hadlaya walaacooda oo ay ka baqayaan in wax badan, ama aad u muuqda, dhaqamada amniga dalxiisku ay u horseedi doonaan baqdinta booqdayaasha iyo hoos u dhaca macaashka.
Kadibna COVID-19 wuxuu noqday mid dhab ah, nooc kasta oo amniguna wuxuu noqday mid muhiim ah.
Qarnigii kow iyo labaatanaad sanadkii kowaad ee tobankiisii ​​sano ee saddexaad ayaa beddelay dhammaan fikradii hore.
Adduun ka khatar badan, booqdayaasha iyo dalxiisayaashu waxay dalbadeen inay ogaadaan waxa taxaddarrada caafimaad iyo caafimaadka la qaadanayo, sida loo tixgelinayo ammaankooda, iyo cidda loo noqonayo haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah.
Maamulayaasha dalxiiska casriga ahi waxay aqoonsan yihiin inay jiraan isbedel aasaasi ah oo ku socda warshadaha safarka iyo in mala-awaal hore uusan sii hayn doonin. Sababtoo ah dowladdu waxay soo rogtay xirmooyin badan iyo baahida loo qabo in laga shaqeeyo guriga, la noolaanshaha fikradaha ganacsi dhowr sano ka hor oo keliya ayaa ah mid aad u khatar badan oo laga yaabo inuu farqiga u dhexeeya badbaadada ganacsiga iyo guuldarradiisa.
Hay'adahaas iyo ururada ku jira warshadaha safarka iyo dalxiiska ee soo dhoweeya oo xoogga saaraya amniga waxay fursad wanaagsan u heli doonaan inay sii noolaadaan waxaana ku jira qaybo ka mid ah warshadaha, sida jardiinooyinka qaranka, kuwaas oo xiriir la leh dowladda. Goobaha bixiya waxay bixinayaan nabadgelyo wanaagsan oo lagu qasan yahay adeegga macaamiisha oo wanaagsan waxay leeyihiin fursad wanaagsan oo adkeysi iyo badbaado. In kasta oo aanu qofna soo saari karin nabadgelyo buuxda, haddana ma naqaanno caqabadaha hortaagan, farsamooyinka hoos ku xusan ayaa kaa caawin kara inaad bartilmaameed yar noqotid oo aad dhaqso uga soo kabato. Waxay kaa caawin karaan inaad u isticmaasho amniga, amniga, iyo caafimaadka qalab suuqgeyn ah. Furaha ayaa ah in laga bilaabo guulaha la gaari karo loona isticmaalo guulahaas si loo dhiso xawaare.
• Amniga iyo badbaadada, iyo caafimaadka bulshada waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin macno kala duwan oo ku saabsan aqoonyahanada iyo dowlada Mareykanka, laakiin aduunka safarka waa isku mid waana isku mid. BoostadaCovid xilli waa muhiim inaan aqoonsanno in biyaha sunta ah, nadaafad darrada, iyo rasaasta ay leeyihiin natiijooyin isku mid ah: burburka ganacsigaaga dalxiis. Waa lagama maarmaan in warshadaha safarka iyo dalxiisku ay fahmaan xiriirka ka dhexeeya maaraynta halista iyo amniga. Waa laba dhinac oo isku lacag ah. Meelaha hela heshiis ballaadhan oo xayeysiis ah, si caddaalad ah ama caddaalad darro ah, waa inay ka shaqeeyaan sidii loo beddeli lahaa aragtida haddii ay rajeynayaan inay badbaadaan.
• Qurxinta iyo nabad gelyadu way isla socdaan oo gacmaha ayey isla baxaan. Markuu deegaanku nabdoon yahay, booqdehu sidoo kale wuxuu dareemaa ammaan. Xirfadleyda amniga dalxiiska waxay ogyihiin in amniga wanaagsan uu ka bilaabmo a aragtida amniga. Adiga oo nadiifiya jidadkaaga, ubax ku beeraya, geedo iyo jardiinooyin yaryar oo ku xeeran magaaladaada, ma yareynaysid oo keliya fursadaha uu fal dambiyeed ka dhici karo laakiin sidoo kale waxaad kordhinaysaa rabitaanka martida ee ah inuu waqti la qaato bulshadaada. Hubso inaad markii aad muuqaal muuqaal ah u samaynayso si waafaqsan mabaadi'da CPTED (ka hortagga dambiyada iyadoo loo marayo naqshad deegaanka).
• Ka taxaddar cidda aad dooratay inaad ku casuuntid bulshadaada si aad talo uga siiso. Khubarada amniga dalxiiska waa inay yaqaanaan labada dalxiis iyo amniga. Waxaa jira jaamacado badan oo bixiya koorsooyin ku saabsan dalxiiska laakiin tiro yar oo fahamsan xiriirka ka dhexeeya damaanada dalxiiska iyo dalxiiska. Martiqaad dadka caawin kara bulshada kaliya ma aha inay xalliyaan dhibaatada laakiin waxay horumariyaan aragti. Amniga dalxiisku wuxuu noqon karaa oo keliya aalad suuq-geyn haddii ay qayb ka tahay aragtida guud ee bulshada. Taas macnaheedu waa in aragtida ay tahay inay aqbalaan soojiidashada maxalliga ah, siyaasiyiinta, waaxaha booliska, jawaabeyaasha ugu horreeya, maareynta hudheelada, milkiilayaasha makhaayadaha, iyo maamulka dalxiiska.
• Weligaa ha abuurin dareemo been abuur ah oo nabadgelyo, nabadgelyo ah markay tahay caafimaadka booqdaha. Weligaa ha ballan qaadin wixii aadan fulin karin. Musiibooyinka suuqgeynta waxay dhacaan marka xaqiiqadu aysan u dhigmin filashooyinka. Tababar oo u diyaari bulshadaada inay ahaato mid amaan ah oo xasiloon. Nabadgelyada wanaagsan maaha arrin gaas gaas ah, laakiin waa macquul. Hubi si aad u hubiso in calaamadahaagu sax yihiin, dib u eeg qaababka taraafikada, oo aad siisid macluumaadka dalxiiska ee ugu dambeeyay iyo lambarrada gurmadka.
• Samee dadaallo wadashaqeyn oo lala yeesho booliskaaga iyo waaxda dabka, bixiyeyaasha gargaarka degdegga ah, shaqaalaha caafimaadka iyo isbitaalada. Hubso in jawaabeyaashaada koowaad, kuwa dadweynaha iyo kuwa macaash doonaba ay ka warqabaan sida amniga dalxiisku muhiim ugu yahay dalxiiska. Tusaale ahaan, inta badan saraakiisha booliska waligood looma tababarin amniga dalxiiska oo wanaagsan. Waa lama huraan in la helo qof la shaqeeya booliiska xaafaddaada, amniga gaarka ah, unugyada ambalaaska, iyo unugyada gargaarka degdegga ah ee "turjumi kara" inta udhaxeysa dalxiiska iyo arrimaha amniga. Saraakiisha dalxiiska badankood ma oga in booliska iyo waaxda dab damisku ay raacaan nidaamyada xafiisyada xafiisyada adag ee Weberian. Haddii waaxdaada sare ee waaxda booliisku aysan taageerin siyaasadda amniga dalxiiska iyo tababarka saraakiisha, markaa waxaa macquul ah iskaashi bilays oo hooseeya. Ka caawi caaqilkaaga inuu fahmo in amniga dalxiisku u yahay ganacsi u fiican bulshada kaliya maahan laakiin sidoo kale waaxdiisa / keeda. Tusaale ahaan, waaxyo badan oo booliis ah ayaa wali aaminsan in shaqadooda ay tahay inay lacag u kasbadaan beelahooda iyagoo u siinaya tikidhada taraafikada. Dowladaada magaaladaada ha u sharaxdo waaxdaada booliiska in siyaasadaha noocaas ah aysan ahayn oo kaliya kuwo waqtigooda dhacay laakiin ay yihiin kuwo aan faa iido lahayn.
• Sii aqoon-isweydaarsiyo saaxiibbadaada amniga iyo nabadgelyada ee dalxiiska. Qaybaha jawaabta ee ugu horreeya waxay aad u dooni doonaan inay ka caawiyaan amniga dalxiiska haddii ay iyaguna arkaan faa'iidooyinka. Tus iyaga sida faa'iidada dalxiisku uga caawin karo inay soo iibsadaan qalab cusub, ay ku maalgeliyaan jago cusub ama ay ku caawiyaan miisaaniyaddooda.
• Ku dhiirrigeli xirfadleyda amniga dalxiiska iyo la-hawlgalayaasha amniga inay ka soo qayb galaan shirarka shaqsi ahaan iyo khadka tooska ah iyo gobolka ee dalxiiska. Shirka ugu da'da weyn uguna caansan ee looga hadlayo amniga dalxiiska ayaa sanad walba lagu qabtaa magaalada Las Vegas. Waqtigan xaadirka ah shirarkaan shaqsi ahaaneed waxay dib ugu soo laabanayaan nolosha ka dib sanad ay maqnaayeen aafada awgeed. CVB kasta oo weyn waa inuu wakiil ku yeeshaa shirka amniga dalxiiska oo uu weheliyo ugu yaraan hal xubin oo wakaaladeeda sharci fulinta ah.
• Ogow waxa aan amni ku ahayn bulshadaada oo kala shaqee dawladaha hoose sidii loo horumarin lahaa walaacyadaas nabadgelyo. Sidee amni u yahay garoonka diyaaradaha ee deegaankaaga? Shaqaalaha hudheelka iyo makhaayadaha miyaa la baadhayaa sooyaalkooda? Immisa jeer ayaan hubinaa xeerarka caafimaadka ee la cusbooneysiiyay? Immisa jeer ayey darawallada tagaasida ka sarreeyaan lacag-bixinta ama aan kala bixin baabuurtooda? Shirkadaha dalxiisku ma siiyaan macaamiishooda wixii ay ballanqaadaan? Immisa jeer ayaa la xadaa lambarrada kaararka deynta oo qayb ka ah khiyaanada xatooyada aqoonsiga? Waa maxay dhibaatooyinka amniga internetka ee jira ama jiri kara?
• Ogow cidda wax ka baraneysa jaamacadda deegaankaaga, gaar ahaan koorsooyinka injineernimada iyo cidda u isticmaaleysa xirfadiisa waxbarasho asal ahaan basaasnimo. Ardayda jaamacadda waxay u dhaqmaan dhaqan ahaan sida haddii ay yihiin martida muddada-dheer. Jaamacado badan ayaa marti u ah ardayda ajaanibta ah, oo ay wax yar ka ogaadaan. Ardayda jaamacadaha ma yihiin kuwo togan ama taban u leh bulshadaada? Ardayda ajnabiga ah ma u joogaan kaliya ujeedada barashada tacliinta mise waxay sidoo kale ku jiraan howlo qarsoodi ah oo sahan ah? Xirfadleyda dalxiisku waa inay la shaqeeyaan maamulayaasha jaamacadaha iyo khubarada amniga marna inaysan sharciga dhaafin, laakiin sidoo kale inay fikrad fiican ka haystaan ​​cida beeshooda ku sugan iyo sababaha jira.